Soomaali: February 18, 2021
Ku Caawi Degmada SPPS inay Furnaato
Bedqabku waa masuuliyadda qof walba. Waxa aad ku qabato gudaha iyo dibedda iskoolka waxay bulshadeenna oo dhan ka caawinaysaa inay caafimaad qabaan oo ay si bedqab leh wax u bartaan. Dib u eeg SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska oo u isticmaal xusuusin ahaan quseyso gafuur-xirrada, baaritaanka caafimaadka, tilmaamaha safarka, iyo sida loo soo sheego calaamadaha COVID-19 ama dadka aad isugu dhowdihiin.
Keyd: Toddobaadyada ugu Horreeyo ee Waxbarashada Iskoolka la Imanayo
Maalinkii February 1, Saint Paul Public Schools (SPPS) waxay dib u soo dhoweeyeen ku dhowaad 4,000 oo arday oo u yimid waxbarashada qof ahaaneed. Maalinkii February 16, ardayda dhigata fasallada 3-5 waxay iyaguna arkeen "maalintooda koowaad" ee iskoolka. Ka eeg sawirradii toddobaadyadii ugu horreeyay keydkayaga sawirrada sawirkaagana halkan ku soo dir.
Qorshaha Xilliga Qaboobaha
SPPS waxay si joogto ah ula socotaa saadaasha cimilada ee National Weather Service si loo gaaro go'aanka ugu fiican ee u roon ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska. Waxaa naga go'an inaan bulshada la socodsiinno wixii ah xirnaanshaha iyo baajinta iskoolka sababo la xiriira cimilada awgood.
Goobaha Cusub ee Cunto Qaadashada
Cuntada baakadeysan ee bilaashka ah ayaa hadda laga soo qaadan karaa in ka badan 50 iskool oo ku kala yaalla St. Paul. In horey loo soo dalbado cuntada ayay u baahan yihiin dugsiyada hoose iyo dhexe badankooda si waalidku u soo qaato. Ka raadi liiska dhammeystiran ee goobaha, wakhtiyada qaadashada iyo foomka horay-u-dalbashada cuntada boggan: spps.org/2021meals.
Waxaa la joogaa wakhtigii la isku qori lahaa sannad-dugsiyeedka 2021-22! Codsiyada mudnaanta leh waxay qabashadooda ku eg yihiin Jimcaha, March 5. Weli waxaa jira wakhti aad uga qeybgeli kartid booqashada iskoolka oo online ah, ama daawatid fiidiyowyada booqashada iskoolka ama aad tagtid tababarrada is-diiwaangelinta. Xulo ilaa laba iskool oo codso maanta!
Caawinta Waxbarashada Dugsiyada Sare oo Billaabaneysa February 22
Toddobaadka koowaad ee caawinta qof ahaaneed ee ardayda dugsiga sare (fasallada 6-12) ayaa billaabanaya Isniinta, February 22. Sababta loo xushay taariikhdan waa tirada kiisaska COVID-19 ee Degmada Ramsey ayaa ka hooseysay 30 qof labo toddobaad oo isku xiga.
Musharraxiinta Macalinka Sannadka
Saddex macallimiin oo ka tirsan Saint Paul Public Schools ayaa u sharraxan tartanka 2021 ee Macallinka Sannadka ee Minnesota. Waxbadan ka baro macallimiintan: Eugenia Popa (Harding High School), John Horton (JJ Hill Montessori) iyo Kathy Romero (Como Park Senior High School).